Ogaden News Agency (ONA) – Males Zenawi Maxuu Qarinaya? Zenawi oo Dhuumasho ku Jooga Switzerland- Waa warbixin kuso baxday New York Times.
Males Zenawi Maxuu Qarinaya? Zenawi oo Dhuumasho ku Jooga Switzerland- Waa warbixin kuso baxday New York Times.
Raisal Wasaaraha wadanka Ethiopia ayaa dhuumasho ku jooga Magaalada Davos ee wadanka Switzerland halkaas oo uu ka furmay shirweynaha World Economic Forum shirkaas oo wadamada Adduunku isugu yimadeen si loo qiimeyo horumarka ganacsiga iyo dhaqalaha. Waxaana shirkaas kasoo qeyb galay Ra’isal wasaaraha Wadanka Ethiopia Kaligii Taliye Zenawi. Maxaase Zenawi shirkaas uu kala kulmay?
Wargeyska Caanka ah ee New York Times ayaa ka xogwaramay socdaalkii Kaligii Taliye Zenawi oo ay ku sheegeen innuu yahay nin geystay cadaadis badan oo wadankiisa ku xidhay 2 Wariye oo u dhashay wadanka Sweden. kuwaas oo xabsiga ku jiri doona 11 sanno. Waxaa kale oo Zenawi uu ku xidhay Gudaha Ethiopia 114 Wariye oo Ethiopian ah sanadkii lasoo dhaafay kaliya.
Haddaba ninkan Zenawi lagu magacaabo ayaa markii uu garoonka Switzerland kasoo dagay waxa markiiba raad raacay Wariyaasha Caalamka oo uu kamid yahay Nicholas Kiristov oo ah Suxufi u shaqeeya wargeyska New york Times. Nicholas ayaa sheegay innuu meel kasta ka raadiyay Ra’isalwasaaraha Ethiopia oo gabanaya kana cararaya wariyaasha innuu lakulmo. Waxaan maray jid kasta oo aan ninkaas ku arki lahaa waana ii suurtoobi wayday, waxaana markii danbe aan go’ansaday inaan baafiyo Zenawi oo ka baafiyo Tiwterka. qofki hela si uu u weydiiyo suaasha ah. Ninyahow Maxaad qarinaysa oo ku aasan Ogadeniya!
Ethiopia waxa ka taliya qabiilka Zenawi oo ah Tigre oo ah iyagu qabiil aad u tiro yar marka loo bar bardhigo qowmiyadaha kale ee Ethiopia. Waxayna si cawaanimo ah tacadi ugu geystaan Ogadeniya halkaas oo ay iska caabin kala kulmaan xoogaga xoriyad doonka ah. Sanadkii 2007 Wariye aan ka wada shaqeyno Wargeyska NYT- Geffrey Gettleman ayaa aaday Ogadeniya oo indhihiisa kusoo arkay kana soo waramay sida shacabka Ogadeniya loola dhaqmo ee leh dilka iyo kufsiga. Waqtigaas iyada ah waxa Taliska Tigreegu ay ku xidheen Ogadeniya Wariye Geffrey oo muddo 7 maalmood ah xabsi ku jiray.
Eega laba nin oo u dhashay wadanka Sweden oo suxufiyiin ah ayaa galay Ogadeniya si ay ula kulmaan Jabhada ONLF ugana soo warxbixiyaan xaalada Ogadeniya. Labadaas wariye waxaa qabtay ciidanka ethiopia waxaana lagu xukumay 11 Sanno oo xadhig ah.
Labadan wariye waa lasii deyn doona si dhaqso leh oo waxaa daba taagan beesha caalamka oo cadaadis xoogan ku heysa Balse waxa aan waxba loo qaban doonin dadka Somalida Ogadeniya iyo Ethiopiada kale ee ka buuxa xabsiyda.
Wariyaha oo qoraal dheer qoray ayaa kusoo gaba gabeeyay warbixintiisii-
Males Zenawiyow maanta Hadaad dhumaaleysi aad ku gabatay Davos dhexdeeda, waxaad oggaata inaadsan sidaas ku fakan doonin. Ciqaabta aad ku heyso wariyaasha Ree Sweden, Wariyaasha Mareykanka iyo kuwa u dhashay Ethiopiana in aysan ku aamusi doonin warbaahinta caalamku. Waxaadna isugu baaqday ood u yeedhatay wariyaasha caalamka kuwaasoo raadsan doona waxa aad qarinayso shiishka ayayna saari waana la baadhi waxaad qarinayso.
Qeybta Ingiriiksa ka firso Warbixintaas oo dhameys tiran oo luqada Ingiriisiga ah. ama hoos ka furo linkigan.